James Rodriguez oo iska diidi doona xiisaha uga imaanaya Premier League & Labada kooxood ee uu ku biiri karo oo daaha laga rogay | Somali football world
Home SOOMAALI James Rodriguez oo iska diidi doona xiisaha uga imaanaya Premier League &...
(Madrid) 16 Nof 2019. James Rodriguez ayaa la soo sheegayaa inuu iska diidi doono xiisaha uga imaanaya horyaalka Premier League, iyadoo haatan la shaaciyey saddexda kooxood ee midkood uu ku biiri karo haddii uu ka tago Real Madrid.
Warsidaha Don Balon ayaa warinaya in James Rodriguez uu iska diidi doono inuu aado horyaalka Premier League haddii uu ka tagayo Real Madrid, waxaana uu kaliya kala dooran doonaa Paris Saint-Germain iyo Inter Milan.
Weeraryahankan ayaa qeyb wanaagsan ka qaatay Mustaqbalkiisa Los Blancos weliba si amaah ah, laakiin waxa uu helayaa xiiso ballaaran oo uga imaanaya dalka Ingiriiska.
Xiddiga xulka qaranka Colombia ayaan aadi doonin dalka England, halkaasoo kooxo badan ay xiiseynayaan isaga, waxaana uu kala dooran doonaa kooxdii uu ku biiri lahaa naadiga reer France ee PSG iyo Tan reer Talyaani ee Inter Milan.
Previous articleMan arrested after Wycombe goalkeeper Ryan Allsop reports homophobic abuse at Tranmere
Next articleTababare Antonio Conte oo ammaankiisa u qalqal galay & Booliska oo ilaalo ka haya afaafka Gurigiisa iyo Xerada Tababarka Kooxda Inter